Tinye: IsDB Transform Fund 2021 ($ 500 Million) Na-emeghe Ndị Innovators
Tinye: IsDB Transform Fund 2021 ($ 500) na-emepe ndị Innovators
Kemgbe ihe karịrị otu afọ, oria ojoo nke COVID-19 na-agbasa n'ụwa niile, na-ebute ọnwụ na mmetụta mmekọrịta akụ na ụba na akụ na ụba. Ulo oru pere mpe na obodo ndi dara ogbenye enweela nsogbu kachasi ike ma choo nlebara anya.
Ọ bụ maka ebumnuche ndị a ka Islamic Development Bank (IsDB) kwuputala oku maka mgbanwe ego maka Innovation 2021 nke ga-elekwasị anya na ịkwado ya Mba Mba'iweghachite na oria ojoo nke COVID-19 na ebumnuche nke iwulite ọdịnihu siri ike, nwekwu ume ma nwee ọganihu.
Banyere IsDB Transform Fund
Amalitere na 2018, Ego Transform bụ atụmatụ nke Islamic Development Bank na ntinye ya ogologo oge iji jikwa ike nke Sayensị, Teknụzụ na Innovation (STI) na-enyere aka idozi nsogbu mmepe ụwa.
Ezubere ego US $ 500 iji tinye ego na ịnwale echiche ọhụụ ọhụụ na ịbawanye ihe ọhụụ site n'inye mkpụrụ ego maka ndị na-agbanwe agbanwe, ndị ọchụnta ego, mmalite, SMEs, na ụlọ ọrụ ma ọ bụ isi obodo iji zụlite ma na-azụ ahịa ihe ọhụụ ga-eweta mmetụta akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. .
Kpọọ maka Innovation ga-achọpụta, gbaa ume, ma kwụọ ụgwọ ọhụrụ, atụmatụ dị elu dị elu nke na-akwado SDGs 2,3,4,6,7 na 9:
Ezi ahụike na ọdịmma
Mmiri Dị Ọcha na Idebe Ihe Nsọ
Ọnụ ọnụ ma dị ọcha Energy
Lọ ọrụ, Innovation na Infrastructure
Otu ngwa di:
Ebumnuche ọhụrụ na ihe akaebe nke echiche
Onyinye sitere na US $ 50,000-100,000
Nyochaa nke Mmemme ohuru na ngalaba nkeonwe
Ngalaba Ngalaba Azụmahịa Onwe Gị US $ 300,000
Commercialization nke Teknụzụ na Ngalaba nke Onwe
Ngalaba Ngalaba Azụmahịa Onwe Gị US $ 1,000,000
Ike Owuwu na Sayensị, Teknụzụ, na Innovation
Onyinye sitere na US $ 100,000-150,000
Agbanyeghi na IsDB Transform Fund na-emeghere onye ọ bụla na-ewepụta ihe, ọchụnta ego, mmalite, SME, na ụlọ ọrụ ọ bụla, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọrụ gị ga-emerịrị ma mepụta n'otu ma ọ bụ karịa otu IsDB Mba Mba.
a Innovation nwere ike ibu uzo ohuru ma obu mmelite di nkpa na uzo di. Kedu ka nke a si dị iche na ụzọ ndị ọzọ? Gini mere uzo gi ji buru oganihu?
(b) Mmetụta na Mgbasa Ozi: Kedu ka echiche gị nwere ike isi metụta ihe ịma aka na IsDB Member Countries (MCs) ma ọ bụ ndị na-abụghị MC metụtara otu n'ime SDG ndị a: Enweghị Agụụ (nchekwa nri), ezigbo ahụike na ọdịmma , agụmakwụkwọ dị mma, mmiri dị ọcha, na idebe ihe ọcha, ọnụ ahịa na ume dị ọcha, ụlọ ọrụ, ihe ọhụrụ, na akụrụngwa. Kedu onye echiche gị ga - enyere aka? Kedu ka a ga-esi tụọ mmetụta ya? Mmadu ole ga-enwe mmetuta oma na obere, ọkara, na ogologo oge?
(c) Do nwere ike irite uru: Bara uru ma echiche gị ọ dabara adaba? Enwere ike itinye ya n'ọrụ? Nkà na ụzụ ọ chọrọ iji mejuputa echiche gị dị? Kedu ihe bụ usoro nhazi usoro a kapịrị ọnụ? Kwuo kpọmkwem otú ị ga-esi rụọ ọrụ ahụ.
(d) Kwadoro: Echiche ahụ, mgbe emesịrị ghọọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ga-egosiputa ikike ịto eto onwe ya n'ihe gbasara ịga n'ihu na mmetụta ọ tụrụ anya ya.
(e) Nwere ike ịkpụzi ya: Enwere ike ịbawanye echiche a ma gbanwee ya na IsDB MCs (ọkachasị na LDMCs) na-enweghị mkpa maka nnabata ma ọ bụ ndozi ọzọ? Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ ọ ga - enwe ike ịrụ ọrụ na mpaghara ndị ọzọ yana ntọala 6 ma ọ bụ nke a bụ mbọ otu oge? Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ ọ ga-enwe ike ịbawanye na iru ọtụtụ mmadụ? Ọ bụrụ otú ahụ, n'ụzọ dị a ?aa?
(f) Patentable na Azụmahịa Ga Echiche: Ndi gị echiche nwere ikike patent? Naanị kọwaa otu ị si hụ echiche gị n'ọdịnihu ka ọ bụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ azụmahịa. Kọwaa atụmatụ gị maka patenti na / ma ọ bụ ụghalaahịa nke echiche ma ọ bụ ọrụ. Echiche ahụ ga-enwerịrị ikike maka nchedo patenti na mmepe n'ime ngwa ahịa ma ọ bụ ọrụ azụmaahịa yana uru elere anya ya.
Tupu itinye akwụkwọ maka Transform Fund, ọ dị mkpa ịghọta otu esi:
Jiri ngwa dee ngwa ịntanetị;
Tinye aka na ohere inye ego maka gị na ụlọ ọrụ gị. Maka ozi ndị ọzọ gbasara otu esi etinye akwụkwọ, jiri nwayọ gụọ ya ụkpụrụ nduzi
Biko, pịa Ebe a ịmepụta akaụntụ ma banye ka ị sonye. Ntinye aka na-akwụsị na Mọnde, Mee 31, 2021.